Home Wararka Mahdi Guuleed oo sheegay inuu dhexdhexaad ka yahay colaada Farmaajo & Rooble
Mahdi Guuleed oo sheegay inuu dhexdhexaad ka yahay colaada Farmaajo & Rooble
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa ugu baaqay labada xafiis ee ugu saareyso dalka in ay dejiyaan xaaladda kacsan.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in uu dagaalka socdo dhexdhexaad uu ka yahay ra’iisul wasaare ku-xigeenka dalka. ” Waxa aan ahay “Tabliiqi Nabadeed”. Waxaa aan labada oday ugu baaqayaa in ay dalka caymadiyaan,” ayuu yiri Mahdi Guuleed.
Hadalka ka soo yeeray Mahdi Guuleed ayaa u muuqada mid uu garab ku siinayo Farmaajo isaga oo aan si toosa u carabaabin taageeradiisa. Xaqiiqda waxa ay ahayd inuu si toosa u taageero Ra’iisal Wasaarihii isaga soo magacaabay!
Previous articleFarmaajo suspends PM as US, UK call for credible, rapid conclusion
Next articleFarmaajo oo kulan kula jira taliyayaasha ciidamada Qalabka Sida: Milateriga, Booliska, NISA
Caasimada Shiinaha oo laga diiwaan galiyay kiisas cusub oo caabuqa Karona...
Qoyskii Axmed Dowlo oo ka hadlay caddaalad darada Maxkamadda G. Banaadir...